भीमार्जुनको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको बोली बन्द - Sankalpa Khabar
भीमार्जुनको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको बोली बन्द
४ माघ १५:२२
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ जारी छ । आजदेखि मुख्य मुद्दामा निरन्तर बहस हुने भएको छ ।
आइतबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, डा.भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए ।अधिवक्ता आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गरे । उनले संविधानले दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने बताए।
पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा। दोश्रो, संविधानअनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा। आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषयमा संविधानले ‘व’ समेत उच्चारण नगरेको तर्क गरे।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोधिन्– सिचुएसन इमर्ज भएपछि पाउँछ भनेको हो ? आचार्यले प्रतिनिधिसभा विघटन धारा ८५ अनुसार हुन नसक्ने बताए। उनले अगावै विघटन भएमा वाहेक ५ वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। अनि ‘बाहेक’ शब्द नभएको भए अवस्था अन्य हुने बताए।
‘उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर संसद विघटन गर्न पाउने भन्नेछ, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने छ ? षड्यन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेपछि संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने छ ?,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार अगावै विघटन भएकोबाहेक संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भन्ने छ। यहाँ त अगावै विघटन भएकोबाहेक भन्ने फ्रेजको पनि दुरूपयोग भयो ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ?’आचार्यले भने, सरकारको विकल्प छैन त्यसैले संसद विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क नमिलेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा राजनीतिक निर्णय भनिएको विषयमा खण्डन गरे।
उनले विगतमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे व्याख्या गरेको चार वटा नजिर रहेको बताए। अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको आचार्यले बताए। न्यायाधीशले सोधे, धारा ७६ को २ अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन ? अधिवक्ता आचार्यले संविधानले लेखेको सर्तबमोजिम हुने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, धारा ७६ को ७ ले सरकार बन्न सक्ने अवस्थामा सम्म हुन्न भनेको हो ? आचार्यले जवाफ दिए, ‘बिल्कुल।’